hamropusta.comLatest News 'तँलाई जेसुकै होस्, मतलव छैन, काममा हन्ड्रेड पर्सेन्ट चाहियो!' – hamropusta.com
पढ्ने समय :6मिनेट
मेरा आँखा टिलपिल हुनुअघि उसले भनेको थियो – ‘मलाई कसैको ‘मेन्टल, इमोसनल स्टेट’को मतलव छैन। बस् काममा ‘हन्ड्रेड पर्सेन्ट’ चाहियो।’
जसले सोच्नुपर्ने हो, तिनले सोचेनन्। सोध्नु परको कुरा! त्यसैले ४ किलोमिटर बाटो छिचोल्न ४० किलोमिटर परबाट साथी बोलाएँ। भनेँ – ‘भोलिदेखि काम सुरु हुन्छ। जसरी पनि पुग्नु छ। पुर्‍याइदेउ न है।’
प्रश्नले झस्काएको थियो। तर, बोल्न आवश्यक लागेन। खुट्टा नजिकको फिलिङ्गो उचालेर आगो फुकेजस्तो गरेँ। मन थाम्न तानेको लामो सास फालिनसक्दै अर्को कोही बोल्यो – ‘उमेर। सबै उमेरले गर्दा हुन्छ।’
त्यहाँको गन्थन चुपचाप सहेर बसेँ। किनकि मेरो मनमा के गुज्रिरहे’थ्यो त्यो जो कोहीसँग सहजै साट्न सक्ने चक्लेटको मिठास वा जिब्रोमा झुन्डिने चट्पटेको स्वाद थिएन।
घटनापछि सँगै काम गर्न खटिएका कसैसँगको पनि संवादमा रुची रहेन। फेरि ‘आखिर केको तनाव, केको पिर?’ जस्ता प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने भयको गुजुल्टोमा अल्झिएँ।
हरेकपटक आफू रित्तो र सबै कुरा शून्य लाग्ने अवस्थामा मान्छे किन र कसरी पुग्छ? कारण मलाई पनि त थाहा छैन। जसले बुझ्छ जस्तो लाग्छ उसलाई नजिकै राखेर भनिन्छ – म सधैँ उस्तै नहाँस्न सक्छु। कहिले काहीँ नदुखे पनि रुन सक्छु। सधैँ स्वभाविक प्रस्तुत नहुन सक्छु। अनिद्राले छट्पटाउँदा बेपर्वाह हिँड्न सक्छु। सम्हाली दिनु न है?
खैर, विश्वास र आशा गरिएकाले नै – ‘कामको बिचमा यस्ता व्यक्तिगत् समस्या नमिसाउनु’ भनेपछि आग्रहको अर्थ के? यस्ता जवाफहरूले परकम्पले जस्तै पच्छ्याइरह्यो। निकै पछिसम्म।
काम गर्ने ठाउँको वातावरण, हुने व्यक्तिगत प्रहार, त्यसले निम्त्याउने निराशा र निराशाले पार्ने आघातलाई शोषण मान्ने कि नमान्ने? मानसिक शोषण। लाग्यो – प्रश्न साँच्चै आवश्यक छ।
त्यतिबेला मसँग दङ्ग पर्नुपर्ने कारण थियो। उनले इंगित गरेको ‘नेपाली’मा म पनि पर्थेँ।
लेखेकी थिइन् – ‘ म आफ्नो रहर पूरा गर्न निकै चिसो ठाउँमा पढाउन गएँ। त्यहाँका मानिसको मन भने निकै न्यानो रहेछ। मैले पहिले काम गरेको संस्थामा जस्तो तनाव र असहयोग भोग्नु परेन। न त थेरापी डगको नै सहारा लिनु पर्‍यो। मैले भनेको थिएँ नि असल मानिसहरूसँग समय बिताउन सहज हुन्छ।’
कति सुन्दर शैलीमा लेखेकी थिइन् उनले अनुभूति। पूरा याद छैन तर मैले दोहोर्‍याएर पढेँ। र, उसका लागि खुशी भएको बताउनु अघि ‘थेरापी डग’बारे खोजेँ।
मान्छेलाई स्नेह दिने, तनावमुक्त रहन साथ र सहयोग गर्ने कुकुर। साह्रै रोचक लाग्यो। थप खोजेँ, मान्छेलाई भावनात्मक साथ दिनका लागि अस्पताल, विद्यालयदेखि कार्यालयसम्म राखिँदो रहेछ, त्यस्ता कुकुर। सुन्दा अनि पढ्दा कति सुन्दर सुनिन्छ – एउटा मान्छेलाई भावनात्मक अनि मानसिक रुपमा कमजोर महसुस हुँदा भाषा नै नबुझ्ने अर्को प्राणीको साथ – स्पर्श गरेर, अंगालो हालेर।
त्यस्तो अवस्थामा कायम औपचारिकता र पदको प्रतिष्ठाले रोक्नसक्छ हामीलाई – कसैको भोगाइ नियाल्न, उनीहरूको छेउमा जान र अनुभूतिबारे प्रश्न गर्न, मान्छेलाई मान्छेसँग नजिक बनाउन। केही नम्र, उदार र निकट बनेर फरक संघर्षबारे बुझ्न, जुन संघर्षले उसलाई कार्यकक्षका सबैभन्दा ‘घुसघुसे’, ‘घमण्डी’ वा ‘कसैसँग नमिल्ने’ बनाएर अलग राखेको हुन्छ।
तीन महिनाअघि नेपाली फिल्म उद्योगका फाइट निर्दशनको टोलीसँगको यात्रामा थिएँ। कुराकानीको क्रममा एक स्टन्ट म्यानले सुनाए – सुटिङको बेला कहिलेकाहीँ दुर्घटना हुन्छ। कलाकारको हातखुट्टा भाचिन्छ। जसको भाँचियो ऊ पीडामा हुन्छ। तर, प्राय निर्माता-निर्देशकले कस्तो छ अवस्था? सोध्न पनि भ्याउँदैनन्। उनीहरूलाई त सुटिङको दिन लम्बिनु र खर्च बढ्नुको मात्र चिन्ता।
‘ट्वाइलेटमा चिप्लिएर लडेँ अनि हात भाँचिएछ’ जस्तो सहज जवाफ नफर्काउला तर तपाईँ थोरै उदार भइदिनुले ऊ खुल्न सक्छ। र, दिनसक्छ जनाउ, जसले उसलाई दुखाइरहेको छ; निरन्तर असक्षम र असफल महसुस गराइरहेछ।
काम लगाउनेहरूलाई काम गर्नेहरूको पसिनाको मोलमात्र थाहा हुन्छ। तर, कामदारको भोगाइ र संवेदनासँग समभाव राख्न खोज्दैनन् उनीहरू – एउटै तीतो भोगाइका कारण मैले यसरी सोच्न थालेको थिएँ। काम लगाउने ओहदाका सबैलाई एउटै घानमा हालिसकेको थिएँ। तर, जब आफूले काममा ध्यान दिन नसकेको ‘गनगन’ बोकेर सम्पादकसम्म पुगेँ। त्यहाँ पाएको जवाफले झस्कायो। धत्, कति चाँडो ‘जजमेन्टल’ भएछु म।
‘काम गर्न नसकेको भए फिल्म हेर्नु वा किताब पढ्नु। तर, अफिस चाहिँ आउनु। एक्लै बसेर हुँदैन’ भन्ने जवाफले हतोत्साही मलाई बेग्लै ऊर्जा दियो। त्यही एउटै वचनले रोकेको हो मलाई, निरन्तर मागिरहेको ‘ब्रेक’ लिन।
तत्काल म काममा ‘हन्ड्रेट पर्सेन्ट’ दिनसक्ने अवस्थामा थिइँन होला। तर, आफूले पाएको प्रोत्साहनका शब्दहरूले बुझायो – कहिले काहीँ जति सकिन्छ त्यतिमात्र गर्दा केही फरक पर्दैन। बस् त्यो वातावरण चाहिन्छ जहाँ हामीसँगै उभिनेहरूले भनुन् – तेरो मानसिक स्वास्थ्य र भावनात्मक अवस्थाको मलाई ‘हन्ड्रेड पर्सेन्ट’ मतलव छ। आखिर त्यही वातावरणले त रहेछ हामीलाई सशक्त, पूर्ण र सुरक्षित महसुस गराउने।
धानलाई ‘राष्ट्रिय गौरवको बाली’ घोषणा गरौँ